Tababarihii Xulka Gobolka Saaxil iyo 15 Ciyaartooy Oo Is Casilay Iyo Sababaha Ku Dhaliyey | Somaliland Post
Home News Tababarihii Xulka Gobolka Saaxil iyo 15 Ciyaartooy Oo Is Casilay Iyo Sababaha...
Hargeysa(SLpost) – Tababarihii xulka kubadda cagta ee gobolka Saaxil, Mr. Maxamed Axmed Ismaaciil (Shakuur), ayaa shaaca ka qaaday inuu gabi-ahaanba iska casilay xilkii tababarenimo ee gobolka Saaxil, ka dib markii sida uu sheegay uu dhibaatooyin badan kala kulmay Badhasaabka Gobolka iyo isku-duwaha ciyaaraha Saaxil.
Tababare Maxamed Axmed Ismaaciil (Shakuur), ayaa xulka gobolka Saaxil u hoggaamiyay inay u soo gudbaan tartanka ciyaaraha gobolladda ee siddeed dhammaadka (quarter final)-ka oo maalmaha soo socda ka bilaabmi doona garoonka kubadda cagta ee Magaaladda Hargeysa.
Tababaraha xulka Gobolka Saaxil oo galabta u warramayay Cumar Maxamed Faarax oo ka tirsan Dawan, waxa uu sheegay in isaga iyo 15 ciyaartoy oo ka tirsan xulkiisii ay gabi ahaanba iska casileen xulka kubadda cagta Saaxil.
“Waxaan Caddaynayaa inaan maanta iska casilay tabobarenimaddii xulka Gobolka Saaxil oo aan si weyn oo daacadnimo leh u carbiyay oo aan ku guulaystay inay u soo gudbaan wareega labaad ee tartanka ciyaaraha gobollada ama sideed dhammaadka, hase yeeshee aan xilkaa iska casilay markii ay dhibaatooyin badan iyo wada shaqayn la’aan aan kala kulmay Badhasaabka Gobolka iyo Isku-duwaha ciyaaraha gobolka Saaxil,”ayuu yidhi Tababare Shakuur.
Maxamed Axmed Ismaaciil (Shakuur) oo ka hadlayay asbaabaha iscasilaadiisa dhaliyay waxa uu yidhi “Waxa kale oo iscasilaadaydan igu weheliya 15 ciyaartoy oo 11 aan ka kaxeeyay Magaaladda Hargeysa iyo 4 ciyaar-yahan oo aanu ka keenay degmadda Sheekh ee gobolka Saaxil, maamulka gobolku xataa waxay garan waayeen inay na weydiiyaan xaalladda ciyaartoy naga dhaawacmay oo aan jeebadayda ka daweeyay. Taasina waa arrin aanan marnaba filaynin. Waxa kale oo ay nagu hayeen faro-gelin kala duwan oo aan xul ahaan u wanaagsanayn .”
Tababare Shakuur waxa uu ka mid ahaa ciyaar-yahanadii waaweynaa ee gobolkii Waqooyi galbeed xilligii Soomaaliya. Waxa uu tartankii ciyaaraha gobollada ee kan ka horeeyay ahaa macalinka xulka kubadda cagta ee Daad-madheedh, waxaanu soo gaadhsiiyay wareega afar dhammaadka (Semi-final)-ka.
Iscasilaada tababarahan iyo ciyaartoygiisu waxay caqabad ku noqonayaan xulka Kubbadda cagta Saaxil oo sannadihii u dambeeyay oo dhan ku hadhi jiray wareega koowaad, hase yeeshee sannadkan sameeyay horumar balaadhan.